Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Wowow Madoobaha Madbakha Madow: Qaabka iyo Shaqeynta Hal Qalab
2020 / 11 / 12 QoondayntaTilmaamaha qasabada 8617 0
Tuubada jikada madow waxay qurxin kartaa jikadaada daqiiqad gudaheed. Ma jiraan wax shuruud ah oo aad ku daawan karto qasabado kale oo ku habboon saxankaaga ama weelka kale ee jikada maxaa yeelay qasabada madow jikada daa'in kara shaqada. Waxaa laguu xaqiijin karaa waqti nasasho iyo raaxo leh jikada markii aad wada haysato.
Markay noqoto kala duwanaanta, madow waa mid ka mid ah kuwa ku siin kara adiga oo kale. Madow ayaa isla markiiba la qabsan kara midabada deriska la ah. Haddii aad leedahay jiko ay ku rakiban yihiin qasabado bir ah, madow isla markiiba wuu isu beddeli karaa iyaga.
Fiiro gaar ah: Haddii jikadaadu leedahay alwaax alwaax ah, madow wali wax kama badali karo. Marka waxaad si daacad ah u oran kartaa in madow uu ku siin doono waqti muuqda marka ay timaado samaynta jikadaada oo u ekaato mid qurux badan.
Talo Pro: Uma baahnid inaad dib-u-habayn ku sameysid naqshadda iyo dulucda jikadaada markii aad tan oo dhan haysid. Xaqiiqdii, waxay xitaa ku siin kartaa muuqaalkan cusub ee fasalka jikadaada.
Noocyada qasabada Madbakha Madow
Waxaa jira noocyo badan oo qasabadaha jikada madow ah oo la heli karo. Qaar ka mid ah kuwan waxay leeyihiin gacan qabadyo si khaldan loo qorsheeyay. Qaarkood waxay leeyihiin tufaax jilicsan oo jilicsan oo muujinaya taabasho xarrago leh oo ku saabsan.
Fiiro gaar ah: Qaarkood waxay leeyihiin tufaaxyo si fudud looga wareejin karo dhinac iyo dhinac, iyagoo siinaya raaxeysiiyaha isticmaalaha. Sidaa darteed haddii aad ku samaynaysid cuntada fudud iyo qadada jikada, inaad haysato qasabada ugu fiican dhamaantiis shaki la'aan waxay ka dhignaan kartaa mudadaada.
Talo Pro: Inta badan qasabadahaan waxaa laga soo saaray alwaax ama bir bir ah. Maaddooyinkaasi waa kuwo aan difaaci karin daxalka. Sidaa darteed, waxay kaa heli karaan inaad la kulanto qasabaddaada waqtiyo.
Si dhakhso ah ugama dhacaan si ay u isticmaalaan oo u kala baxaan, iyada oo la oggol yahay inay si sax ah u rakiban yihiin. Rakibaadda khaldan waxay u horseedi kartaa cilad deg deg ah ee qasabadda, oo markaa waa in laga fogaadaa dhammaan qiimaha.
Astaamaha Qasabadda Madbakha Madow
Madaxa lagu buufiyo
Qasabadaha yar ayaa leh madax buufin oo aad si fudud u maamuli karto. Kuwani waa kuwo la hagaajin karo, badankooduna waxay leeyihiin iskudhafyo isku dhafan oo karti u leh dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa.
Kartida Xaddididda Heerkulka
Qaar ka mid ah qasabadahaan ayaa runtii leh fikradaha heerkulka waxayna sidoo kale leeyihiin awood isku dhafan oo lagu xakameynayo heerkulka. Sifadaani waxay ka hortageysaa gubida wixii lama filaan ah ee dhaca. Astaamahani waa lama huraan haddii aad caruur ku leedahay guriga.
Madow marwalba wuu fiicnaan doonaa
Markaad aadeysid qasabadaha lagu bixiyo madow, waxaad fahamsan tahay inaad soo iibsan doontid qalab joogto ah oo quruxsan sida xitaa dhammaystirka iyo isbeddellada reerku isu beddelaan.
Fiiro gaar ah: Madow had iyo jeer waa qumman yahay; weli waxay ilaalin doontaa jawi welwel leh oo soo jiidasho leh. Haddii aad u dhaqaaqdo madbakh dhammaan-caddaan ah ama mawduuc midab leh oo hodan ah, qasabadaha jikada madow iyo qalabka korontada ayaa ku habboonaan doona isla markaana isla fiirinaya.
Waxay amni u tahay sida isku-xidhka birta ee soo noqnoqda, laakiin jidka ayaa ka xiiso badan.
Aragtida ugu dambeysa
Caadi ahaan, qasabadaha jikada madow waxaa loo qaadan karaa inay yihiin waxyaabo isku dhafan oo jikada ka mid ah oo si weyn u bixin kara qanacsanaanta aad dareento mar kasta oo aad jikada ku jirto. Waxay sidoo kale wax badan ka qabaneysaa sameynta jikada mid qurux badan.
Sidaas, waxa aad sugayso?
Ka soo iibso Matte Black jiido Down Kitchen Tuubada Wowow oo jikadaada ka dhig mid soo jiidasho leh!
Hore:: Sida Loo Xullo qasabadaha Jikada Next: Fikradaha ugu sarreeya ee dib-u-habeynta musqusha ee miisaaniyadda
2021 / 01 / 28 9901